Fumax - Orinasa afaka manamboatra vokatra PCB varahina isan-karazany. Miaraka amin'ny traikefa manan-karena, malaza amin'ny famokarana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifanay izahay. Ary ny Fumax koa dia afaka manamboatra ny PCB varahina matevina hahafahany mifanaraka tsara amin'ny filan'ny mpanjifa rehetra.
Ny haben'ny vokatra PCB matevina coco izay azon'i Fumax atolotra：
* Layer layers 1-14 sosona） ；
Ny PCB varahina matevina dia afaka mitondra ankehitriny kokoa amin'ny alàlan'ny tariby raha ampitahaina amin'ny fampiasana fitaovana varahina hafa amin'ny famokarana tariby. Ary ny fampiasana ny PCB varahina dia mamela ny fizarana angovo hafanana mitovy amin'ny tariby ary koa mampitombo ny tanjaky ny tariby eo amin'ny toerana misy ny fifandraisana. Ataon'izy ireo ho mora sy azo atao koa ny manamboatra fitaovana kely kokoa. Izany dia satria ny tariby dia azo aforitra mora foana hifanindry ary hamela famoronana toerana bebe kokoa amin'ny fitaovana kely.
Ny varahina mavesatra dia azo ampiasaina amin'ny tanjona isan-karazany, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ho, mpanitsy herinaratra avo lenta, fanaparitahana hafanana, mpanova planar, mpanova herinaratra, solosaina, miaramila, familiana fiara elektrika, rafitra fifandimbiasana herinaratra, sns.
* Fitaovana welding
* Mpanamboatra tontonana amin'ny masoandro
* Famatsiana herinaratra
* Fitsinjarana herinaratra elektrika
* Mpanova herinaratra